“Haddii Nabad La Doonayo Ha Iscasilo Madaxweynaha Afghanistan…” Ururka Taalibaan – somalilandtoday.com
“Haddii Nabad La Doonayo Ha Iscasilo Madaxweynaha Afghanistan…” Ururka Taalibaan
(SLT- Afghanistan)-Ururka Taalibaan ayaa sheegay inay dooneyn in tallada dalka Afghanistan ay xoog ku maroojistaan, waxayna carrabka ku dhufteen in ayna marnaba ka suuragalayn nabad dalkaasi ka hanaqaado ilaa dowlad ku meel gaadh ah la dhiso madaxweyne Ashraf Ghani-na xilka laga qaado.
Afhayeenka Ururka Taalibaan Suhail Shaheen oo wakaaladda wararka ee AP wareysi siiyey ayaa sharraxaad ka bixiyey mowqifka ururka Taalibaan ee ku aaddan mustaqbalka dalka Afghanistan.
Suhail Shaheen ayaa sida oo kale ka mid ahaa ergooyinka ururka Taalibaan ka socda oo waddama badan wadaxaajoodyo ka dhacay ururka Taalibaan ku matalay.
Kaddib marki ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada NATO ay billaabeen iney dalka Afghanistaan ka baxaan ururka Taalibaan ayaa gacanta ku dhagay qayba badan oo dalkaasi ka mid ah.
Mark Miller oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo ka hadlay war-saxaafadeed lagu qabtay Pentagon wuxuu sheegay Ururka Taalibaan inuu leeyahay bartilmaameed uu ku socdo.
General Mark Milley ma inkirin Taalibaan inuu awood u lahaa Afghanistan oo dhan inuu la wareego xataa intii ay ciidamadoodu dalkaasi howlgalka ku joogeen.
“Wadahadallo kaddib Kabul marka laga dhiso dowlad ay dhinacyada oo dhan raalli ku wada yihiin, Dowladda Ashraf Ghani-na meesha ay ka baxdo markaas ayuu Ururka Taalibaan Hubka dhigayaa” ayuu yiri Suhail Shaheen oo u warramay wakaaladda wararka ee AP.
“Waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo inaanan dooneyn inaan talada dalka Afghanistan xoog ku qabsanno sababta oo ah dowladaha waxa ay marar badan isku dayeen in awoodda dalka la qaybsado balse dadaalladoodi hal bacaad lagu lisay ay noqdeen.”
Suhail Shaheen wuxuu sida oo kale uu soo hadal qaaday dowladihi fashilmay uu Taalibaan maamulayey. Wuxuuna caddeeyey inuu ururkiisa dooneyn inuu markale uu qaato qaacidadii khaldaneyd uu hore ugu soo fashilmay.
Balse ururka Taalibaan wuxuu markale caddeeyey in arrinta Madaxweyne Ashraf Ghani aan wax tanaasul ah laga sameyneynin.
Salaasadii khudbad uu Madaxweyne Ashraf Ghani uu jeediyey wuxuu ku weeraray ururka Taalibaan. Ururka Talibaan oo hadalka Ghani ka jawaabayana waxay Ashraf Ghani ku tilmaameen nin dagaalka ka ganacsada.
Suhail Shaheen wuxuu sheegay madaxweyne Ashraf Ghani inuu farahiisa ka baxay xuquuqdi uu u lahaa inuu dalka Afghanistan uu hoggaamiyo. Waxayna Taalibaan madaxweyne Ghani ku eedeeyeen doorashadi 2019-ka inuu hab musuqmaasuq ah uu ugu guuleystay.
Kaddib doorashadi ugu dambeeysay ee dalkaasi ka dhacday Asharaf Ghani iyo ninki la loollamayey Cabdalla Cabdalla waxay labadooduba ku doodayeen iney doorashada ku guuleysteen.
Inkasta oo marki dambe labada dhinac uu heshiis dhexmaray oo Cabdalla Cabdalla la siiyey kaalinta labaad ee guusha doorashada loona magacaabay madaxa guddiga dib u heshiisiinta qaran.
Xoghayaha arrimaha saxaafadda ee aqalka cad Jen Psaki oo Jimcihi AP u warrantay waxay sheegtay madaxweyne Biden inuu taageerayo Madaxweyne Ashraf Ghani xilliga uu ururka Taalibaan uu dalbanayo in xilka uu ka dago.